Maxamuud Axmed Muuse | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha | Page 2
Cudur kasta waxa uu leeyahay daawooyin ugaara mid kaalmaati iyo mid sugan oo lagu dabar gooyo xanuunka. Daawooyinka ayaa isugu jira kuwa ka samaysan kiimiko iyo kuwa aan ka samaysnayn oo ah kuwo Herbal ah. Xilliga aynu hadda joogno Soomaalidu waxay 95% isticmaashaa daawada kiimikada ah iyagoo u adeegsanaya qaabab kala duwan iyo xanuuno ay la daala dhacayeen in ay ku dhakhtaraan. Waxaa jira daawooyin Herbal ah oo loo isticmaalo qaabab kala duwan walow 80% aysan aqoon fiican u lahayn Soomaalida adeegsigeeda waayo cilmi qoto-dheer u malahan habka ugu sahlan ee …
Waxay ahayd qiso aad ucajiiba oo ka yaabisay dad badan kadib nin gaal ah oo udhashay waddanka Maraykanka oo ku caan baxay islaam nacaybka uu noqday Muslim. Waxaa la sheegaa ninka la dhaho Mac Mckinney in uu ka tirsanaa ciidanka badda ee Maraykanka . Waxa uu ka howl gali jiray Afgaanistaan, waxa uu ahaa xagjir aad uneceb diinta islaamka isla markaana ahaa mid neceb qofka sheegta islaam. Intii uu askariga ahaa waxa uu laayay malaayiin muslim ah, qeyb uu qarxiyay, qaar uu laayay iyo qaar ka badbaaday bay isugu jireen. Muddo dheer uu ka dagaalamayay Waddanka Afgaanistaan wuxuu ku dhaawacmay …
Cabsidu waa in aad ka baqdo wax muuqda iyo wax aysan ishaadu qaban karin. Waxa muuqda waxay noqon karaan bahal aad ka argagaxdo, qof aad ka cabsato, duufaano dhacaya, dabaylo, dagaalo IWM. Halka waxa aan muuqan noqon karto hadaf aad lahayd oo aad ka cabsato in aad gaadho, in aad samaysato ganacsi oo istiraahdo waan khasaaraya ma samayn karo, buug aad rabtay in aad qodho oo cabsi kaa soo wajahday. Cabsida ugu fiican ee adduun iyo aakhiro lagu liibaano waa tan Alle looga cabsado, waynaantiisa, ciqaabaadkiisa IWM. Waana mid ubaahan qofka in uu had iyo jeer maskaxda ku hayo in …
Qadartu waa waxkasta oo ka baxsan gacan bini’aadam waana awooda Alle. Qadartuna waxay ka mid tahay iimaanka in aad rumayso wax kasta oo kugu dhaca kheyr iyo shar kuu doono ha ahaadee. Qofka muslimka ah waa mid rumaysan qadarta Eebbe iyo wax kasta oo ku dhaca. Dhibaatooyinka adduunka ka jira kuwa ugu badan waxay ka jiraan caalamul islaam ama dunida islaamka hadday ahaan lahayd dagaalo, abaaro, gaajo, qaxooti, rafaad iyo silic oo dhan. Iyada oo intaas iyo kabadan oo dhibaato ah ay ka jiraan dunida islaamka haddana arki maysid ama maqli maysid qof la dhahaayo hebel waxa uu hiifay ama …
Waxaa jira astaamo aad ubadan oo lagu garto ragga xun-xun. Waxaana ka mid ah;- Marka uu kula hadlaayo waxa uu kaa dhaadhicinayaa been iyo boranbogaado. Waxa uu marwalba ku faanaa in uu yahay halyay, geesi, deeqsi, codkar, hal-adayg. Waxa uu mar walba ku dhaartaa been, aan sal iyo raadtoona lahayn. Waxa uu ku celceliyaa aniga adduunka oo dhan baa iyaqaan, waxaan ahay nin hantiile ah, hantidaydu waxay buux dhaafisay bangiyada caalamka. Waxa uu labaxaa dhoor dheer sida shimbir dhoorta oo kale, waxa uu xiirtaa jeegadda iyo dhinacyadda madaxa. Ma tukado salaadaha faralka ah, waxa uu la saaxiibaa inta xun, waxa …
Waxaan horay uga hadalnay calaamadaha lagu garto gabadha wanaagsan, sidoo kalena waxaan aad usoo falanqaynay dhaqanka gabadha suuban. Waxaan ka sheekeynaynaa gabadha xun, waa tuma ama waa tee? Gabdhuhu ma wada xuma balse waxaa jira hablo fara ku tiris ah, oo aan wanaagsanayn. Waa tii horay loo yiri (Baruur baa baruuro qurmisa), halka gabar ee xun ayaa galaafata dumar badan oo wanaagsan. Haddaba si aad ugarato qofka xun waa inaad ka eegtaa xogta uu xambaarsan yahay maqaalkaan:- Gabadha xuni waxay wareegtaa suuqyada, meelaha lagu ciyaaro, lagu qabto bandhig faneeyadda.Waxay taagan tahay meelkasta oo lagu ciyaarayo daaniska iyo aroosyada aan laga …
Dunida aad arkayso waxa jira dad badan oo ku dulman dunida guud keeda oo haysan wax garab iyo gaashaan unoqda. Maxamed waa wiil Soomaaliyeed oo ku dhashay, kuna barbaaray magaalada Muqdisho.Waxa uu ahaa agoon aan haysan cid garab unoqota iyo cid uu wehel ka dhigto. Maxamed aabihii waxa uu dhalay labo Wiil iyo gabadh oo isku hooyo yihiin.Waxa dhacday in xilligii hogaamiye kooxeedyadii ay habeen uyimaadeen reerka iyagoo raadinaya hub, raashin iyo lacagba. Balse xaafada ma oolin wax lacag ah iyo hubtoona, waxa keliya oo guriga yaalay uu ahaa raashin aan badnayn. Waxay baaritaan ugu dhaqaaqeen guriga kolkii ay ka …
Waxaa jira hablo aad u wanaagsan oo ku sifoobay diin, akhlaaq, xishood, karti, howl karnimo, oolimaad dheer, debecsanaan, dhowr sanaan, afgaabni, tixgelin, dad la dhaqan wanaagsan, iyo u deg degidda xuska Alle. Sidoo kalena waxaa jira intaas in lid ku ah. Haddaba si aad u garato, waxaad ku garan kartaa qodobadaan soo socda;- Waxay ku asturantahay gurigeeda kama soo baxdo, waa qof ku sifowday maqbiyo. Waxay leedahay diin, waxay u deg degtaa kheyrka, mana jirto meel aan goob cilmiyeed ahayn ey aado.Waa qof xishood badan, afgaaban, aan waxay doonto ku hadlin. Waxay leedahay aqoon diineed, mid cilmi waxaase asal u …
Doorasho marka laga hadlaayo waxaa lagu macneeyaa in qof kala doorato waxyaalo badan sida walxo, shaqo, dad IWM. Balse doorashada aan ka hadlayno waxa weeye in gabadha muslimada ah ay doorato ninka ay la wadaagayso mustaqbal guur. Waxaa in badan hablaha Soomaaliyeed ku jahwareeraan ruuxii ay guursan lahaayeen, mustaqbalkooda kii ay ku aamini lahaayeen. Waxaase soowajaha caqabado badan sida in ay kala garan waydo waxa ay ku raacayso ninka. Si aysan ugu wareerin gabadha waa in ay ku raacdaa ninka qodobadaan soo socda. Waa in uu yahay ruux Alle ku xiran, lana yimaada wixii la faradyeelay iyo wixii laga reebay. …
Waxkasta waxa ay kala leeyihiin dabeecado kala jaad ah oo aan isku mid ahayn. Bini’aadanka waa kala duwanyahay ilaa xad, isku midna ma ahan xaqiiqdii. Waxa jira dad jecel khiyaaliga iyo sheekooyinka iyo dad jecel xaqiiqooyinka iyo qisaska iyo kuwo aanba intaas midna jeclayn. Dadka jecel khiyaaliga waa dad inta badan xiiseeya waxyaalaha been abuurka ah ama xiiseeya wixii markaas soo baxa un. Waxa lagayaabaa in aad la kulanto dad meel ku sheekaysanaya oo dhammaantood aan ka hadlayn run balse ka hadlaya oo keliya sheekooyin ban abuur ah iyo falsafad aan sal iyo raadtoona lahayn. Waxay kaloo ka hadlaan had …